Home » Nkọ Ọrịa Cancer » Candị Ọrịa kansa » Ọrịa Cancer Anyị Na-emeso » Lymphoma na-abụghị Hodgkin
Lymphoma na-abụghị Hodgkin bụ ụdị malignancy nke na-etolite na sistemụ lymphatic gị. Ọ na - esite na ụdọ ahụ gị, nke bụ ụdị mkpụrụ ndụ ọbara dị ọcha. Lymphoma na-abụghị Hodgkin bụ ihe a na-ahụkarị na Lymphoma nke Hodgkin, o nwekwara ọtụtụ ụdị. Ọdịiche dị n’etiti subtypes ya na-adabere n’ụdị sel sitere na lymphoma sitere. N'ihi ya, anyị nwere lymphomas B-cell nke na-ebilite site na nzụlite B-sel, yana lymphomas T-cell na-esite n’ịzụlite mkpụrụ ndụ T-cell.
Ọganihu ndị na-adịbeghị anya na nkà mmụta ọgwụ na teknụzụ na-eme ka Lymphoma Non-Hodgkin bụrụ ọrịa na-agwọkarị.
Sistemu nke lymphatic anyị nwere ọtụtụ narị akpụ akpụ, bụ nke achọtara n'akụkụ niile na ahụ, na-enyere anyị aka ịlụ ọgụ megide ọrịa dị iche iche. Akụkụ akụrụngwa buru ibu n’ahụ anyị bụ akpụ, nke na - eme dị ka nzacha ọbara na nchekwa nke na - alụso ọrịa ọgụ, mgbe ọ dị mkpa. Azụ ara anyị bụ obere ihe na-ahụ ọsụsọ na-edobe Lymph nke irighiri akwara na sel. Sistemu (lymphatic sistem) anyị nwere tonsils, adenoids, spplet na thymus. Sistemmufo mu no n’egwuregwu ma n’enwe oria site na oria di iche iche dika oria lymphomas.
Kedu otu a na-ahụkarị Lymphoma nke Non-Hodgkin?
Lymphoma na-abụghị Hodgkin bụ otu n'ime ụdị ọrịa kansa a na-ahụkarị na US. Ọ dị ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ 4% nke ọrịa cancer niile. Oria a ga - emetụta ihe edere 77,240 ndị mmadụ na 2020 na US Ọzọkwa, ọ ga-egbu ihe 19,940 ndị mmadụ n’otu afọ. O nwere ike imetụta ndị mmadụ si n’ ọgbọ niile, gụnyere ụmụaka na ndị nọ n’oge uto. Lymphoma na-abụghị Hodgkin dị obere karịa n’ebe ụmụ nwanyị nọ karịa n’ebe ụmụ nwoke nọ. Onu ogugu nke nha nke afọ ise diri ndi nwere Lymphoma na-adighi Hodgkin 71%. Ihe ngbaputa ndu nke onwa iri diri 60%. Ọnụnọ nke metastases ndị dị anya, ọnụego afọ ise ga-agbada 61.6%.
Kedu ihe na-akpata Lymphoma Non-Hodgkin?
Dika otutu oge, ndi sayensi amaghi ihe n’eme ka Lymphoma Non-Hodgkin. Mgbanwe ma ọ bụ mgbanwe na DNA nke sel ụfọdụ nwere ike ibu ọrụ. Ihe ndị dọkịta doro anya bụ na Lymphoma Non-Hodgkin na-esite na sistemụ adịghị ike ma na-esote mmụba nke lymphocytes. Lymphoma na-abụghị Hodgkin nwere ike ịmalite na B ma ọ bụ T lymphocytes.
Ihe ndị dị ize ndụ nke Lymphoma nke Non-Hodgkin
Ihe ndị nwere ọghọm na-eme ka mmadụ nwekwuo ohere ibute ọrịa. Ihe ndị a bụ ụfọdụ n'ime ezigbo ntọala ihe ize ndụ maka Lymphoma na-abụghị Hodgkin:
Immunosuppressants. Ọgwụ Immunosuppressant nwere ike ịbawanye ohere gị nke ịrịa ọrịa Lymphoma na-abụghị Hodgkin n'ihi na ha na-ebelata ikike ịlụso ọrịa ọgụ ọgụ.
Nje na nje. Nje HIV na Epstein-Barr, yana Helicobacter pylori, nwere ike ịbawanye n'ihe ize ndụ maka Lymphoma Non-Hodgkin.
Chemicals. Chemicalsfọdụ kemịkalụ na-ewelite ohere gị n’ịmepụta Lymphoma nke Non-Hodgkin n’ọdịnihu.
Agadi. Lymphoma na-abụghị Hodgkin nwere ike imetụta ndị ọgbọ niile. Agbanyeghị, ihe egwu dị na ịbawanye na afọ yana kachasị na ndị mmadụ afọ iri isii ma ọ bụ karịa.
Ọrịa na akara nke Lymphoma Non-Hodgkin
Ihe ndia bu ụfọdụ ihe iriba ama na akara aria nke akaghi aru nke Hodgkin:
Ọkwa nwere akpụ ọnya na-egbu gị olu, akwara ma ọ bụ ukwu na-enweghị mgbu
Kwara afọ ma ọ bụ dyspnea
Ike ọgwụgwụ na-adịgide adịgide nke anaghị anaghị ezu ike
Ahụ ọkụ na ọatsụ sweụ abalị
Ibelata ibu n’agbalighị ya ike
Lydị Lymphoma nke Non-Hodgkin
Themara ụdị Lymphoma nke Non-Hodgkin dị mkpa maka njikwa na ọgwụgwọ ya. Iji mata ụdị mkpụrụ ndụ kansa dị na lymphoma, ndị dọkịta na-eme biopsy ma lee anụ ahụ nlele n'okpuru mikroskopu. Followingdị ndị a bụ ise dị mkpa nke Lymphoma nke Non-Hodgkin:
Ọrịa leukemia na-ala ala
Cutrious B-cell lymphoma
Mplọ akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ
Nchoputa nke Lymphoma nke Non-Hodgkin
Iji chọpụta Lymphoma na-abụghị Hodgkin, dọkịta gị ga-ewere akụkọ gbasara ahụike gị ma jụọ ajụjụ ụfọdụ gbasara ụdị ndụ gị na ihe ndị nwere ike ibute gị. Mgbe nke ahụ gasịrị, ọ ga-eme nyocha anụ ahụ, ya na palpal to Lymph nodes gị. Ọgụ dị n'ọbara zuru oke dịkwa mkpa. I nwekwara ike ịchọ ọgwụ biodeji na nyocha ụmị ọkpụkpụ. Na mmechi, inyocha onyonyo nwere ike inyere dọkịta gị aka wepụta ọrịa ahụ ma chọpụta ma enwere ebe metastases dị. Usoro nke Li-Hodgkin's Lymphoma bụ ndị a:
Ogbo. Ọrịa kansa bụ otu mpaghara mpaghara lymph.
Nkeji II. Ọrịa kansa dị na mpaghara lymph node abụọ, ma ọ bụ wakporo otu akụkụ ahụ na oghere lymph dị nso. Agbanyeghị, ọrịa cancer dị n'okpuru ma ọ bụ karịa diaphragm.
Ogbo III. Ọrịa kansa dị n’elu na ala diaphragm.
Ogbo III. Enwere metastases ndị dị anya na akụkụ ahụ ndị ọzọ.
Ihe ndi a bu ufodu ule ima-nma ka ichoputa Lymphoma nke ndi No-Hodgkin:
Kọmputa tomography (CT)
Imaging resonance Magnetic (MRI)
Positron emmo tomography (PET)
Gịnị bụ ọgwụgwọ nke Lymphoma na-abụghị Hodgkin?
Ka ịhọrọ usoro ọgwụgwọ ziri ezi, dọkịta gị kwesịrị ịtụle akparamagwa gị niile, dịka afọ gị na ọnụnọ ma ọ bụ enweghị ọrịa ndị ọzọ. Isi ihe ọzọ dị mkpa gbasara ọgwụgwọ bụ ọkwa nke lọtoma gị. N'ọnọdụ ụfọdụ, ọgwụgwọ adịghị mkpa ma ọlị. Nhọrọ maka Lymphoma na-abụghị Hodgkin nwere ike ịbụ otu ma ọ bụ ngwakọta nke ihe ndị a:
Buru n’uche na ọtụtụ nhọrọ ọgwụgwọ nwere nsonaazụ ndị ọzọ, nke ị nwere ike ịgwa dọkịta gị tupu ịmalite usoro ọgwụgwọ ọ bụla. Dịka ọmụmaatụ, ọgwụ anwụ nwere ike ibute ntutu isi, ike ọgwụgwụ, mmerụ ahụ dị mfe, ọgbụgbọ, ọgbụgbọ, na afọ ntachi. Nsonaazụ ndị a na-ahụkarị maka ọgwụgwọ ụzarị ọkụ bụ ọnọdụ akpụkpọ ahụ, ike ọgwụgwụ, ma ọ bụ mmetụta ndị ọzọ na-adịte aka, dịka mmepe nke kansa nke abụọ. Transplantkpụgharị ụmị ọkpụkpụ nwere ike ịnwe mmetụta ndị ọzọ, dabere na isi mmalite ya. Yourkọrọ dọkịta gị ozi gị niile dị oke mkpa tupu ịmalite ọgwụgwọ ọ bụla.